१ हजारमा किनेको औंठी बेच्दा १० करोड ७५ लाख आएपछि… – " सुलभ खबर "
१ हजारमा किनेको औंठी बेच्दा १० करोड ७५ लाख आएपछि…
कहिले काहिँ मानिसलाई नसोचेको फाइदा पुग्छ । समान्य देखिएका चिजबस्तु पनि कहिलेकाहिँ निकै महत्वपूर्ण बन्न जान्छ ।यस्तै भएको छ, बेलायतको लण्डनमा बसोबास गर्ने डेब्रा गोडार्डलाई । उनी अस्वभाविक रुपमा करोडपति भएकी छिन् ।
द सनमा प्रकाशित समाचार अनुसार गोडार्डसँग विगत ३० वर्षदेखि एउटा सुनको औंठी थियो । जसमा एउटा चम्किलो पत्थर जडान गरिएको थियो । उक्त औंठी गोडार्डकी आमाले सेलमा १० पाउन्ड(१ हजार ४ सय ५३ रुपैयाँ) मा किनेकी थिइन् ।
गहना पसलेको सुझावअनुसार गोडार्ड सामान लिलाम गर्ने केन्द्रमा पुगिन्, जहाँ उनको औंठीमा जडान गरिएको हीराले ७ लाख ४० हजार पाउन्ड( करिब १० करोड ७५ लाख नेपाली रुपैयाँ) प्राप्त गर्यो । यति धेरै पैसा आएपछि अहिले यी आमा–छोरी अभावग्रस्त जीवनबाट मुक्त भएका छन् ।
यस्तो लुगा लगाएर हिँड्नु र ? अरुले के भन्लान् ? घरबाहिर यसरी काम गर्नु
विवाह गरेको दुई महिनामै १६ वर्षीया निमाको मृ’त्यु, माइतीलाई श’व पनि देखाइएन (भिडियो)